အာဏာရှင်များကိုးကွယ်ထုလုပ်ထားတဲ့ဆင်းတုတွေဟာ ညာတင်ကုဋ်ဟုတ်ပါလား? ညာတင်ကုဋ်ဆိုတာဘာလဲ – celepublic
အာဏာရှင်များကိုးကွယ်ထုလုပ်ထားတဲ့ဆင်းတုတွေဟာ ညာတင်ကုဋ်ဟုတ်ပါလား? ညာတင်ကုဋ်ဆိုတာဘာလဲ
July 11, 2020 admin New 0
ဘုရားရှင်သည် သင်္ကန်းတော် ဝတ်ဆင်ရာ၌..”ဧကသီ(ကိုယ်ရုံ) သင်္ကန်း”ကို”လက်ဝဲတစ်ဖက် ပခုံးထက်”၌ တင်၍လည်းကောင်းသင်းပိုင် သင်္ကန်း”ကို ခန္ဓာအချက်”ခါးအထက်” ၌ လည်းကောင်းဒုကုဋ်(နှစ်ထပ်သင်္ကန်း)”ကို”ပခုံးထက်”၌ လည်းကောင်း …စနစ်တကျ ဝတ်ဆင် တော်မူမြဲ ဖြစ်၏။ရှေးရှေးဘုရား ရဟန္တာ ပစ္စေကဗုဒ္ဓါများလည်း ထိုကဲ့သို့ပင် ဝတ်ရုံတော်မူကြသည်။လက်ယာဘက်ပခုံး၌သင်္ကန်းတင်သည်ဟုထုံးစံမရှိချေ..၊လတ်တလော တွေ့မြင်ကြရသောဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီူသန်းရွှေ(ငြိမ်း)+ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်အားအမှူးထား၍ ဟုဆိုကာ ဗိုလ်ချုပ်များ လှူဒါန်းထားသော လက်တဖက်နောက်ပစ်ဟန် ပျဉ်းမနားမြို့မင်းဝံတောင်တွင် တွေ့ရှိရသော ဘုရားဆင်းတုများအားအချို့ကဘုရားမဟုတ် ညာတင်ကုဋ် ” ဟူ၍ပြောဆိုကြ၏။ ညာတင်ကုဋ် ဟု ပြောဆိုသူတို့သည်ညာတင်ကုဋ် အကြောင်းကိုတော့ သေချာသိထားဖို့လိုအပ်လှပါသည်။
ညာတင်ကုဋ် ဆင်းတုဆိုသည်မှာ(၁)လက်တဆုပ်သာသာ ဝန်းကျင်အရွယ်ရှိသည်။(၂)ညာတင်ကုဋ် ဆင်းတု အတွင်းတွင် (ရှေးဆရာ)လောကီဆရာ အဂ္ဂိရပ်သမားတို့ စီရင်ထားသည့်အထိုက်အသင့် လမ်းရောက်ပြီးသောဓါတ်လုံးပါရှိ၏။(၃)ညာတင်ကုဋ် ဆင်းတုအားလက်နှင့်ဆုပ်ကိုင် လှုပ်ကြည့်က” ဂ လုပ် ဂလုပ် ” အသံမြည်သည်။အသံမြည်ရခြင်းမှာ ဆင်းတုတွင်းဓါတ်လုံးပါဝင်သောကြောင့်မည်ရခြင်းပင်(၄)ညာတင်ကုပ်ဆင်းတုမှန်သမျှသည်ပြဒါးသေဖြင့်သာပြုလုပ်ထားသောကြောင့်ပြဒါးခဲဆင်းတုသာရှိ၏။(၅)ညာတင်ကုဋ် ဆင်းတုသည်လက်ယာဘက်သို့ သင်္ကန်းတင်ထားသည့်အသွင်သဏ္ဍာန် ဆင်းတုဖြစ်ပါသည်။(၆)ညာတင်ကုဋ် ဆင်းတုသည်လက်အနောက်ပြန်ထားခြင်းမရှိပါ။လက်တော် အထားအသိုမှာဘုရားဆင်းတုတော်တို့၏လက်ဟန် အနေအထားနှင့် ဆင်တူ၏။(၇)ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေ ရရှိသောညာတင်ကုဋ်တွင်မည်သည့် အင်းကွက်မျှမပါဝင်ပါ။အင်းကွက်ပါသောညာတင်ကုဋ်များသည် အစစ်ထက်အတုဖြစ်ဖို့ များ၏။အင်းက အဓိကမကျဆင်းတုအတွင်း ဓါတ်လုံးကအဓိကျ ပေသည်။
ညာတင်ကုဋ်ဆင်းတု ရဖူးသူ ရှိသလောညာတင်ကုဋ်ဆင်းတုအပါအဝင်ကြေးမည်း(ခြစ်ပိတ်) နှစ်မျိုးလုံးကို ရဖူးသူရှိပါသည်။ရှေးဟောင်းပစ္စည်းအရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်သူပဲခူးမြို့နေ ကိုမြင့်သိန်းဆိုသူသည် အဆိုပါနှစ်ရုပ်လုံးကိုရဖူးပြီး စာရေးသူ နှင့် အလွန်ခင်မင်သောကြောင့်သူမကွယ်လွန်မီ သူ့ထံမှ တဆင့်ကြားသိရခြင်းဖြစ်သည်ထိုရှားပါးလှပြီး မြင်တွေ့ရခဲသော အထက်ပါ ပစ္စည်းနှစ်ခုလုံးသည် ပဲခူးရပ်မှ အထင်ကရစေတီတော်တဆူအတွင်းတွင် ဋ္ဌာပနာအနေဖြင့် တည်ရှိပြီးဖြစ်၏။
သူရရှိသော ကြေးမည်း(ခြစ်ပိတ်) ဆိုသည်မှာရှေးဟောင်းပစ္စည်း လောကသားများအသည်းအသန် လွှဖြင့်တိုက်ရှာဖွေနေသောရှေးဟောင်း မြန်မာ့အလေးတလုံးမဟုတ်ပါ။အရောင်အဆင်း မည်းအိစိုပြေလှသောဉာဏ်တော်သေးသေး ဆင်းတုတော်ငယ်တခုသာဖြစ်ပါသည်။ ဆင်းတု အောက်ခြေကိုခပ်နာနာ အစင်းရာ ထင်အောင်တိုက်ကြည့်လေက မိနစ်နှစ်ဆယ်အတွင်းပြန်ပြည့်လေ၏။နာမည်အတန်အသင့်ရနေသောပေ့ချ်နှင့် ဂရုဖောင်ဒါတဦးလည်းဖြစ်ကျွန်တော့် မိတ်ဆွေတယောက်လည်းဖြစ်သောဖရန့်လစ်မှ သူငယ်ချင်းတယောက်သည်ငယ်စဉ်အခါက ကြေးမည်း(ခြစ်ပိတ်)ကိုဆော့ကစားဖူးကြောင်း သိရ၏။သူပြောသော ကြေးမည်းအရုပ်မှာဘုရားဆင်းတု မဟုတ်ဘဲ အမည်းရောင်ဖားရုပ်ဖြစ်ကြောင်းသိရပြီး ခြစ်လိုက်၍ပြန်ပိတ်သွားပုံတို့မှာ ကိုမြင့်သိန်းရရှိသောကြေးမည်းနှင့် တထပ်တည်း တူညီလေသည်။ပြန်ပိတ်တာလည်း အထူးအဆန်းတော့မဟုတ်ပါ။ အရုပ်များ အတွင်းမှ ပြဒါးသည်အရှိန်အဟုန် အင်အားကြီးလှသောမီးနှင့် အကြိမ်ကြိမ် ကစားခြင်းခံရသောကြောင့်ဓါတ်ပြောင်းကာ ဆန့်ကျင်တွန်းကန်သဖြင့်ပြန်ပြန်ပိတ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရ၏။အဆိုပါ ကြေးမည်း (ခြစ်ပိတ်) သည်လည်းအဂ္ဂိရပ် လမ်းစဉ်၏ လမ်းခုလပ်သာ ရှိသေးပြီးထပ်မံမီးနေရန်လိုအပ်သေးကြောင်းဆိုလေသည်။” ညာတင်ကုဋ် ”ကိုမြင့်သိန်း ရရှိသော ညာတင်ကုဋ်အကြောင်းကို စာရေးသူ သိသလောက်ဖော်ပြရသော် အရောင်အဆင်းသည်ဖြူဖြူ နှစ်နှစ်အရောင် ရှိ၏။ လက်တဆုပ်သာသာအရွယ်အစား ရှိပြီး ဉာဏ်တော် မမြင့်မားပါ။လက်နှင့်ကိုင်လှုပ်ကြည့်က ” ဂလုတ် ဂလုတ် “အသံမြည်ပြီး ဆင်းတုတွင်း ပြဒါးလုံးပါဟန်ရှိကြောင်း သိရသည်။ဆင်းတုတော်အား အလယ်ဗဟိုတွင် ထား၍ပတ်ပတ်လည်လည်တွင် မြက်ခြောက်တို့ကိုထားပြီး မီးနှင့်ရှို့က မီးသည် ဆင်းတုအနားရောက်သည်နှင့် တန့်လေ သေလေသည်။အခြားသော လိုင်းပေါ်တွင် တင်ထားသူများပြောကြသလို မျက်နှာလှည့်ခြင်း အပ်လွဲခြင်းမရှိပါ။ဓါတ်လုံး၏ အောင်မြင်ခရီးရောက်ပြီးသောအဆင့်အလိုက် ညာတင်ကုဋ်ဆင်းတု တို့သည်အစွမ်းမတူကြောင်းသိရ၏။ရှေးလောကီ ဆရာတို့ရည်ရွယ်ရင်းမှာ နောက်ဆုံးအဆင့်မရောက်သေးသေအဆိုပါ ဓါတ်လုံးကို အဂ္ဂိရပ်လမ်းစဉ်တူသူတို့တွေ့ရှိလေက ဆက်လက်ပြုလုပ်နိုင်ရန် ထားရှိခဲ့ကြောင်း ဆို၏။ညာတင်ကုဋ်အကြောင်း ပြန်လည်အစပြုရသော် ယခုအွန်လိုင်းပေါ်ပျံ့နှံ့နေသည့် လက်တဖက်နောက်ပစ်ထားဟန်ပျဉ်းမနားမြို့ မင်းဝံတောင်တွင် တွေ့ရှိရသောဘုရားဆင်းတုများအား ညာတင်ကုဋ်ဟုတ် မဟုတ် စိစစိကြည့်ရချေက
ပျဉ်းမနားမြို့ မင်းဝံတောင်မှလက်နောက်ပစ်ဆင်းတုများသည်တပေကျော်ကျော် အမြင့်ရှိပြီးလူကြီးတယောက် တပွေ့စာခန့်ကြီးမားလေ၏။(၂)ညာတင်ကုဋ်ဆင်းတု အတွင်းတွင် (ရှေးဆရာ)
လောကီဆရာ အဂ္ဂိရပ်သမားတို့ စီရင်ထားသည့်အထိုက်အသင့် လမ်းရောက်ပြီးသောဓါတ်လုံးပါရှိ၏။ထို့ကြောင့် ညာတင်ကုဋ်ဆင်းတုတခုတလေ တွေ့ရှိရန်မှာအတော်လေးကို ခက်ခဲသောကိစ္စပင် ဖြစ်သည်။ပျဉ်းမနားမြို့ မင်းဝံတောင်မှလက်နောက်ပစ်ဆင်းတုများအတွင်းတွင်အဂ္ဂိရပ် အတတ်ဖြင့် မီးကစားပြီးသောဓါတ်လုံးပါဝင်ခြင်း မရှိဟု မှတ်ထင်ပါသည်။ဆင်းတုများ အလွန်များပြားလှသောကြောင့်ထိုလောက် များပြားလှသောအသင့်အတင့်လမ်းရောက်ပြီးသည့် ဓါတ်လုံးများကိုမည်သည့်လောကီဆရာမှ မဖန်တီးနိုင်ပေ။အကြောင်းမှာ အဂ္ဂိရပ်သမားတယောက်အတွက်အတော်အသင့် ခရီးရောက်နိုင်သော ဓါတ်လုံး တလုံးရရှိရန်ပင် လူ့သက်တမ်းကုန်သည်အထိမလွယ်ကူသောကြောင့်ပင်။ အများစု၏ဓါတ်လုံးတို့သည် ဘာတခုမှ မဖြစ်မြောက်ဘဲပြဒါးခဲ သံခဲ အစရှိသောအနေဖြင့်သာ ခရီးလည်းဆုံး လူလည်းဆုံးကြတာများသောကြောင့်ပင်။ထို့ကြောင့်လည်းထိုထိုသော အဂ္ဂိရပ်သမားတို့သည်မိမိတို့ဓါတ်လုံးကို ကြွားလုံးထုတ်လိမ်လည်မှုတို့သာ များပြားတော့၏။ကုန်းဘောင်ခေတ်စာဆိုတော်စလေဦးပုညကပင် “မဖြစ်ရင်နေ ဖြစ်ရင်ကြေလူလိမ်အတတ် အဂ္ဂိရပ် ” ဟူ၍အဂ္ဂိရပ်လောကတွင် လူလိမ်တို့ကျင်လည်ကြောင်းသတိပေး စပ်ဆိုခဲ့လေ၏။
(၃)ညာတင်ကုဋ် ဆင်းတုမှန်သမျှသည်ပြဒါးသေဖြင့်သာပြုလုပ်ထားသောကြောင့်ပြဒါးခဲဆင်းတုသာရှိ၏။ပျဉ်းမနားမြို့ မင်းဝံတောင်မှလက်နောက်ပစ်ဆင်းတုများသည်ကျောက်ဆင်းတု အကြီးကြီးများဖြစ်သည့်အတွက် ညာတင်ကုဋ်ဟုမည်သည့်နည်းနှင့်မျှ မဆိုနိုင်ပေ။(၄)ညာတင်ကုဋ် မှန်သမျှသည်လက်ယာဘက်သို့ သင်္ကန်းတင်ထားသည့်အသွင်သဏ္ဍာန် ဆင်းတုဖြစ်ပါသည်။ပျဉ်းမနားမြို့ မင်းဝံတောင်မှလက်နောက်ပစ်ဆင်းတုများသည်ဘုရားရှင်တို့ အသွင်သဏ္ဍာန်အတိုင်းသင်္ကန်းကို လက်ဝဲဘက်တွင်တင်ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။
ညာတင်ကုဋ် အမည် အတိုင်းဒုကုဋ်ကိုလက်ယာတင်ထားခြင်းမရှိသောကြောင့်#အဆိုပါဆင်းတုများအားညာတင်ကုဋ်ဟုဆိုရန်အကြောင်းရှာမတွေ့ပေ။(တစ်ဆူ တလေသာ သင်္ကန်းယာတင်ထားသောဆင်းတုများတွေ့သော်လည်း ညာတင်ကုဋ်ပါအခြားအချက်အလက်တို့နှင့် မတူညီကြောင်းနှိုင်းယှဉ်ကြည့်က သိနိုင်ပေမည်။)(၅)ညာတင်ကုဋ်ဆင်းတုသည်လက်အနောက်ပြန်ထားခြင်းမရှိပါ။လက်တော် အထားအသိုမှာဘုရားဆင်းတုတော်တို့၏လက်ဟန်အနေအထားနှင့် ဆင်တူ၏။
ပျဉ်းမနားမြို့ မင်းဝံတောင်မှလက်နောက်ပစ်ဆင်းတုများသည်#ဘုရားရှင်အားလက်ကိုလိမ်ချိုးထားသည့်နှယ်တင်ပါးကျောဘက်တွင်လက်ကျနေပေသည်။ဤရွေ့ ဤမျှ နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့်ပင်ပျဉ်းမနားမြို့မင်းဝံတောင်မှလက်နောက်ပစ်ဆင်းတုများသည်ညာတင်ကုဋ်မဟုတ်ကြောင်း သိသာချေပြီ။ညာတင်ကုဋ်နှင့် ပက်သက်ပြီးရှေးဆရာများ သိုက်စာလိုလိုဝှက်စာလိုလိုထားရစ်ခဲ့သော အဆိုလေးမှာဘုရားမဟုတ်ညာတင်ကုဋ် လှုပ်ကြည့်တော့ ဂလုပ် ဂလုပ် “ဤရွေ့ ဤမျှဖြင့် ညာတင်ကုဋ်ကိုထိထိမိမိ သိနိုင်ပေရာ
လက်ယာဘက် သင်္ကန်းတင်ထားသလား???လှုပ်ကြည့်လို့ ဂလုပ် ဂလုပ် မြည်သလား?ကြည့်ရုံဖြင့် ညာတင်ကုဋ် ဟုတ်မဟုတ်သိနိုင်လေ၏ယခုအတော်များများ စာရေးသူမြင်တွေ့ရသော ညာတင်ကုဋ်များမှာတော့ ညာတင်ကုဋ်အတုများသာ ဖြစ်ပါကြောင်းရေးသားရင်းညာတင်ကုဋ်ဆိုသည်မှစာစုကို နိဂုံးချုပ်လိုက်ပါတော့တယ်။
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဇူလိုင်လမှာ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ကြတဲ့ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ မင်းသား (၃) ဦး